Mampitaha Moto X Play Vs Samsung Galaxy S6 | Androidsis
Fampitahana Moto X Play Vs Samsung Galaxy S6
alexis martinez | | Motorola, About us, Samsung
Omaly dia andro iray tena nafana tokoa, mpanamboatra finday roa no nanolotra ny terminal vaovao ary na dia toa tsy dia toa izany aza, dia mbola mangetaheta ihany isika. Ny iray amin'ireo mpanamboatra izay omaly no mpandray anjara mavitrika atoandro dia ny Motorola miaraka amin'ireo terminal vaovao telo. ny Moto G 2015 na taranaka fahatelo, Moto X Style ary Moto X Play ireo finday avo lenta telo natolotry ny orinasa amerikana.
Efa niresaka momba azy ireo tamin'ny lahatsoratra teo aloha isika ary tonga ny fotoana hampitahana ireo terminal ireo amin'ireo mpifaninana mivantana aminy. Izany no antony hanaovantsika fampitahana amin'ireo terminal farany avo roa: izy ireo no Moto X Play vaovao sy hainasan'ny orinasa Koreana, Samsung Galaxy S6.
Fantatsika fa ny Moto X dia iray amin'ireo finday avo lenta nahatonga ny fahatsapana indrindra tamin'ny taona lasa. Amin'ity taona 2015 ity dia nanantena isika rehetra fa hiaraka amin'ilay vaovao Moto G 2015 na ny taranaka fahatelo, Motorola dia nanolotra ny andiany faharoa amin'ny sainam-bolan'ny orinasa. Na izany aza, tsy izany no izy hatrizay, terminal roa no naseho teo ambanin'ny laharana X an'ny Amerikanina. Iray amin'izany ny Motorola Moto X Play, izay smartphone Android tonga lafatra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Ity sainam-pirenena amerikanina vaovao ity dia tsy maintsy miatrika ireo finday avo lenta avo indrindra izay hitantsika eny an-tsena. Ny iray amin'ireo finday avo lenta avo indrindra amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia ny Samsung Galaxy Galaxy S6. Androany amin'ny Androidsis dia manatanteraka fampitahana mivantana izahay mba hahitana izay fitaovana mivoaka tsara kokoa arakaraka ny toetrany.
1 Mampitaha Moto X Play amin'ny Samsung Galaxy S6
2 Moto X Play The Perfect Android
Mampitaha Moto X Play amin'ny Samsung Galaxy S6
Rafitra fandidiana Android 5.1.1 Lollipop Android 5.1.1 Lollipop
efijery 5 '5 santimetatra IPS Corning Glass 3 vahaolana 1080 x 1920 teboka 403 ppi 5'1 santimetatra Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 1440 x 2560 teboka 577 ppi
processeur Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Quad-core 1.7GHz Exynos 7420 Quad-core 1.5GHz
GPU Adreno 405 Mali-T760MP8
Fahatsiarovana anaty Dika roa 16 / 32GB azo ovaina ho 128GB Andiany telo 32GB / 64GB / 128GB
Fakan-tsary Rear 20 MP / 5248 x 393 / autofocus / dual-led flash (feo roa) 16MP / 2988 x 5312 teboka / autofocus / flash LED
Fakan-tsary aloha 5MP 5MP
ny hafa 4G LTE / GPS misy A-GPS / GLONASS / Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / Micro-USB 2.0 4G LTE / GPS misy A-GPS / GLONASS / Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / Micro-USB 2.0
bateria 3.630 mAh 2.550 Mah
lafiny X X 148 75 10.9 MG X X 143.4 70.5 6.8 MG
lanja Gramin'ny 169 Gramin'ny 138
vidiny Hamafisina: Manodidina ny 300 € Modely 699 euro 32GB / maodely 799 euro 64GB / maodely 899 euro 128GB
Moto X Play The Perfect Android
Ny marina dia, araka ny hitanao eo amin'ny tabilao etsy ambony, ny zavatra dia akaiky tokoa amin'ny fisafidianana smartphone iray hafa. Mazava fa ny Moto X Play dia fitaovana manana fiasa tena mahavariana toy ny fakan-tsary 21 MP, na ny CPU-ny izay matanjaka be, nefa na izany aza, ny Samsung Galaxy S6 dia manana toetra hafa izay tsy ananan'ny X Play.
Fa satria amin'ity fiainana ity dia mila mando kely ianao, nifidy azy izahay Moto X PlaySatria ny fitaovana dia manana toetra mitovy amin'ny sainam-bolan'ny orinasa Koreana ary manodidina ny 300 € ambany noho ny Galaxy S6, zavatra iray izay mahatonga azy io ho Android tonga lafatra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Fampitahana Moto X Play Vs Samsung Galaxy S6
5 hevitra, avelao ny anao
David moreno dia hoy izy:
'fantsona' (avy amin'ny matoanteny manana)
Atsipazo ny masoko azafady.
Valiny tamin'i David Moreno
Gaston duarte dia hoy izy:
na ny kitrokely aza tsy mahatratra Xiaomi mi4 ...
Valiny tamin'i Gaston Duarte
Jesosy Joaquin Gwyddyon dia hoy izy:
Marina ny anao, Gaston. Faly be amin'ny masiniko !!
Valiny tamin'i Jesus Joaquin Gwyddyon
Freddy osorio dia hoy izy:
Heveriko fa tsy mety ny fampitahana! na inona na inona itovizany amin'ny taratasy, na iza na iza manana Galaxy S6 eny an-tànany dia tsy afaka mampitaha azy amin'ny Motorola! ambony ny kalitaon'ny fitaovana !!! Raha mbola te hilaza izay fantatro izy ireo, raha manana ny 300 izy ireo dia handeha amin'ny S6
Valiny tamin'i Freddy Osorio
Ny processeur an'ny roa dia octa-core fa tsy quad-core, amin'ny tranga S6 dia 4 Cortex-A53 1,5 ghz ary 4 Cortex-A57 2,1 ghz raha oharina amin'ny Moto X Play misy 4 amin'ny 1,7 ghz ary 4 amin'ny 1 ghz . Ilaina ihany koa ny manasongadina ny karazana fahatsiarovana ram, ho an'ny S6 3 gb lddr4 raha oharina amin'ny 2 gb lddr3 an'ny moto X; ny fahasamihafana eo amin'ny vava fisongadinan'ny fakan-tsary sy ny endri-javatra maro an'ny S6 izay tsy voalaza anarana akory.
Valiny tamin'i Hector
Tutorial- Ahoana ny fomba hanafoanana ny habaka amin'ny Android hahazoana fampisehoana tsaratsara kokoa
Cube I7 Remix OS: Ireto ny zavatra tsapako taorian'ny roa herinandro niasan'ny tablette mafy